Maanta sawirrada martida inoo ahi waa saddex ee ka noolaada:
You are here: Home Home Maanta sawirrada martida inoo ahi waa saddex ee ka noolaada:
Saraakiishii: Waa sawir muujinaya dhowr sarkaal oo SNM-tii ka tirsanaa una badnaa aasaasayaashii ciidammadii SNM.
Halkan ka akhriso qormadii oo dhamaystiran
Saraakiishii: Waa sawir muujinaya dhowr sarkaal oo SNM-tii ka tirsanaa una badnaa aasaasayaashii ciidammadii SNM. Maxamed Kaahin mooyaane inta kale waa ay shahiidday naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e'. Markii aan sawirka u fiirsaday meeshuu waa Harar ayaan is-idhi. Lebbiska ayaa sheegaya in ay magaalo qabow joogeen. Xilligu haddii aan u xiddigiyo waa 1983kii,
Maxamed Mooge Liibaan: Waa sawir aan ka qaaday Juulay 1983kii isaga oo ku soo socday madashii Shirweynihii 3aad ee SNM oo Harar ku qabsoomay. Subaxdaa waxaanu ka wada nimid Hudheel la odhan jiray Gerum Giant oo woqooyi magaalada Harar ku yaallay halka laga soo galo marka laga yimaaddo Diri-dhabe,
Sawirka saddexaadna waa Xuseen Jaamac Rooble: Fannaankii, Hal-abuurkii, Laxan-dhaadhigii iyo Maadeeyihii jilaaga ahaa,
Halkan ka daalaco sawiradaas